Akụkọ - Nkwado n’eziokwu maka ịchekwa ike yana ngwaahịa nchekwa gburugburu ebe obibi
Multi mmewere elu arụmọrụ ihuenyo bụ humanized na ọgụgụ isi echetakwa akụrụngwa e mere site anyị ụlọ ọrụ dị ka ahịa ina na mmepụta omume.
Arụ ọrụ na njirimara nke ọtụtụ mmewere elu arụmọrụ ihuenyo.
1. Igwe nri na ntanetị na-eme ka ọ dị n'ime. Ihe nnochi uzo nile no na akuku ahuike nke nri nri nke uzo di egwu, uzo nkpuru nke uzo nri di na azu. A na-eji njikọ dị nro roba jikọọ na mkpuchi akara, nke na-echekwa ohere dị elu.
2. Onye na-eri nri jijiji na-adị n’ime ihuenyo ahụ na-eme ka ọ maa jijiji, nke na-ebelata oghere ụzọ ájá ejupụtara. A na-etinye ntinye ọnụ ụzọ ámá n'ime akụkụ nri nke ọdụ ụgbọ mmiri vibration, nke na-eme ka mmetụta nchebe gburugburu ebe obibi dịkwuo mma.
3. Ihuenyo vibration nke jikọrọ ọnụ, mmetụ ihu igwe, akụkụ ihuenyo adịghị esonye na mkpọtụ, belata ogo vibration, belata mmetụta na ntọala ahụ. Ihuenyo na ịma jijiji na-arụnyere na ngalaba, na-ama jijiji n'adabereghị, dị mfe ịkwasasịa ma debe ya.
4. A na-etinye ihe na-emegharị vibration n'èzí n'akụkụ ihuenyo ahụ, nke na-ewepụ ohere nke na nnukwu ájá dị mfe ịbanye n'ime ụlọ na-ebu, na ntanye ahụ nwere ogologo ndụ ọrụ.
5. sintering sieve efere bụ otu-oyi akwa abụọ-kwadoro mmanya sieve efere na elu echetakwa arụmọrụ. Ihuenyo coke nakweere ogwe igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ ogwe osisi seramiiki, na ogologo ndụ na-eguzogide ndụ.
6. A na-emechi usoro nke 6-element high-arụmọrụ ihuenyo ma nwee ezigbo mmetụta nchebe gburugburu ebe obibi.
7. Asaa Usoro nri ka akàràrà na ngò nke nghè ngiri. Ihe a na-esi n'ọnụ ụzọ ámá na-asọpụta gaa na onye na-eri nri, wee banye na nsị na njedebe nkwụsị nke shale shaker na ihe dị n'elu ya, na ihe dị n'okpuru ihuenyo ahụ na-agbapụta mmiri na ihe mkpuchi. A na-emechi njikọ niile siri ike na-enweghị ntụ ntụ, nke nwere ike belata olu ikuku nke mkpọtụ uzuzu uzuzu n'okpuru ebe a na-ere ọkụ ọkụ, ma chekwaa ike iwepu uzuzu na ndozi nke akụrụngwa nchekwa gburugburu ebe obibi. ego.
8. multi mmewere elu arụmọrụ ihuenyo ahụ fọrọ nke nta ndụ ogologo mmezi free, naanị dochie ihuenyo efere na vibration exciter.
Otutu mmewere ihe ngosi di elu, oru oma, ugwo oru di ala, bu ezigbo udiri gi.